သမ္မတဟောင်း နာရေးကြောင့် ဂရမ်မီ ဆန်ခါတင်စာရင်း ထုတ်ပြန်မယ့်အချိန် နောက်ဆုတ်
ပရဟိတငွေ လှူဒါန်းဖို့ ချစ်သူ Orlando Bloom နဲ့ နေ့လယ်စာစားခွင့် လေလံပစ်ခဲ့တဲ့ Katy Perry
အသက်ကြီးမှ အောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော် အနုပညာရှင်များ
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်အတွက် ဝေဖန်တာတွေ လျော့သွားအောင် ကြိုးစားမယ့် ကျော်ကျော်မျိုး
သိမ်ဇရပ်မြို့က "အိပ်မက်သစ် စာကြည့်တိုက်"သို့ အလည်တခေါက်
အော်စကာဆုရမယ့် တာချီလိတ် - မိုင်းဆတ် လမ်း
“အိန်ဂျယ်ရစ်ရစ်” နာမည်နဲ့ ခံစားချက်စာတွေ ရေးဖြစ်နေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း
မင်းသွေး နောက်ဆုံး ပါဝင်ထားတဲ့ "သတ်ကွင်း"အတွက် ရင်ခုန်နေတဲ့ သားညီ
အဆိုတော် Prince ရဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ "Mamma Mia" စတိုင် တေးသံစုံရုပ်ရှင် ဖန်တီးမည်
ကမ္ဘာကျော်တွေ ပြောတဲ့ သူတို့ရဲ့ Celebrity Crush များ
ထိုင်းလူငယ်တွေကြား ရေပန်းစားလာတဲ့ ရွက်လှေစီးခြင်း
ပိုက်ဆံ အကုန်အကျ နည်းနည်းနဲ့ သင့်ကိုယ်သင် ဂရုစိုက်နည်း
အမြဲ တက်ကြွပျော်ရွှင်နေသူတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ နေ့စဉ်အမူအကျင့် ၅ မျိုး
အစ္စရေးလ်ရောက် ထိုင်းလုပ်သားများ အခြေအနေဆိုးဝါးနေမှု အစ္စရေးသံရုံး ငြင်း
ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း အမှု တရားလိုပြ သက်သေ ၁၀၀ ကျော် စစ်ရန် ကျန်သေး
ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပြီးနောက် ဂျပန်ခရီးသွား ဝင်ရောက်မှု တိုးလာဟု ဆို
ကန်-တရုတ် ကုန်သွယ်ရေး စစ်ပွဲ တင်းမာမှု ခေတ္တရပ်ဆိုင်း
မင်းကွန်း ရှေးဟောင်း ကြက်ထောင့်ကန် ရှေးမူမပျက် ပြုပြင်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေတ်လွန် နိုင်ငံရေး နိုးကြားသူ လူငယ်များ
နိုင်ငံတကာနှင့် ကိုက်ညီအောင် မြန်မာ့ ဆန် စပါး စံချိန်စံညွှန်း ပြင်ဆင်နေ
တရုတ် အင်ဂျင်နီယာတွေ အလုံးအရင်း ဝင်လာတော့လေမလား
လင်းခေးတွင် အသက် ၁၁ နှစ် အရွယ် ကလေး တဦး မိုင်းထိ
မန္တလေးကို လှည့်တောင် မကြည့်အားဘူးဟု ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ပြော
အချစ်စစ်ဆိုတာ တကယ်မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ အဆိုတော် Ariana Grande
လုံခြုံရေးစက်ရုပ်တရုပ်ကို တိုကျို ဘူတာရုံမှာ စတင် စမ်းသပ်
Samsung ရဲ့ ခေါက်ချိုးနိုင်တဲ့ Display နည်းပညာ အခိုးခံရ
Suicide လုပ်ပြီးနောက် ငွေကြေး အထောက်အပံ့ လိုအပ်နေတဲ့ အပြာမင်းသမီး Honey Gold
ချစ်သူကို လက်စွပ် ၆ ကွင်းနဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာခွဲစိတ်မှုမှ လုပ်မထားတဲ့ Supermodel ဂျေနော
ဘုရားပွဲ အတွင်း ဝါးကား ဝင်တိုက်၍ ၅ ဦးသေ၊ ၂၀ ဒဏ်ရာရ
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကို အနုပညာကြေး မယူဘဲ ရိုက်ကူးမယ့် လူမင်း
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံက "အရောင်တွေနေတဲ့ သက်တံရွာ"
မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာ ပြန်နွှေးပြီး မစားသင့်တဲ့ အစားအစာများ
တပ်မတော်က ခရိုင် ၄ ခု အတွင်း လမ်းဖောက်နေခြင်း ရပ်ဆိုင်းရန် KNU တောင်းဆို
ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ထွက်ရှိလာတော့မယ့် ရုပ်ရှင်များ
တရုတ်နိုင်ငံမှာ တာထွက် မကောင်းခဲ့တဲ့ "Crazy Rich Asians" ရုပ်ရှင်
အမြင်ရိုင်းတဲ့ ဝတ်စုံကြောင့် တရားစွဲခံခဲ့ရတဲ့ အီဂျစ်ရုပ်ရှင် မင်းသမီး
ချစ်သူကို အဆိုပိုင်းရော၊ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါ အောင်မြင်စေချင်တဲ့ Bobby Soxer
ပအို့ဝ်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် ဦးသန်းရွှေ တွေ့ဆုံ
စီမံကိန်းများ မပြီး၍ ပြည်ပချေးငွေများ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်လာနေ
မူဆယ် ပြည်သူ့စစ်ဂိတ် အပစ်ခံရ၍ ၃ ဦးသေဆုံးပြီး ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ
လက်ခံထားတဲ့ ပွဲတိုင်းကို Sexy ဖက်ရှင်တွေပဲ ဝတ်ဖြစ်မယ့် သင်ဇာဝင့်ကျော်
ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအောက်ခင်းမှာ အိပ်စက်လို့ရတဲ့ "The Muraka" ဟိုတယ်
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက ဘာသာစကား ၁၅ မျိုး ပြောနိုင်တဲ့ ကလေးငယ် နာမည်ကြီးနေ
အရပ်ဘက် အစိုးရက တပ်မတော်နဲ့ ပတ်သက်လေသမျှ
အိန္ဒိယရဲ့ နာမည်ကျော် နန်းတော်တခုမှာ လက်ထပ်ပွဲ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Nick Jonas နဲ့ Priyanka Chopra
မင်းသမီးဖြစ်ဖို့ အများကြီး ကြိုးစားရဦးမယ်လို့ ပြောတဲ့ ဝိုင်းလေး
အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ နစ်ဆန်း ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ကားလို့စ်ဂွန်း
အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ရဲ့ နာရေးအခမ်းအနားကြောင့် ဂရမ်မီဆုစာရင်းကို ကြေညာဖို့ ရွှေ့ဆိုင်းထားပါတယ်
By မစ်ကီ4December 2018
(၆၁) ကြိမ်မြောက် ဂရမ်မီဆုဆန်ခါတင်စာရင်းကို ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့် အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ရဲ့ နာရေးအခမ်းအနားကြောင့် လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ ရောက်မှသာ ကြေညာဖို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ဆုရွေးချယ်ဖို့အတွက် ဆုအမျိုးအစားတွေကို အဲဒီနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်မှာ “CBS This Morning” ကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီး Apple Music ကနေလည်း ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် နံနက် ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ်အချိန်မှာတော့ တေးသံသွင်း အကယ်ဒမီကနေ သတင်းစာထုတ်ပြန်ချက်မှတဆင့် ဆုအမျိုးအစား ၈၄ ခုလုံးကို GRAMMY.com နဲ့ အသံသွင်း အကယ်ဒမီက ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပြီး အသံသွင်းအကယ်ဒမီရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပလက်ဖောင်းတွေကနေ ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရီပါဘလစ်ကန် သမ္မတဟောင်း Bush ဟာ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ အသက် ၉၄ အရွယ်နဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်မှာ ပေးအပ်မယ့် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမှာတော့ General Field ဆုအမျိုးအစားထဲမှာ ဆန်ခါတင်စာရင်း ၈ ခုစီ ပါဝင်လာမယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေကာလတုန်းက ကြေညာထားပါတယ်။
အကောင်းဆုံး မျက်နှာသစ် အနုပညာရှင်ဆု၊ အကောင်းဆုံး သီချင်းဆု၊ အကောင်းဆုံး အသံသွင်းယူမှုဆုနဲ့ တနှစ်တာအတွက် အကောင်းဆုံး အယ်လ်ဘမ်ဆုတို့ဟာ General Field ဆုတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ဆုတွေကတော့ ဆန်ခါတင် ၅ ခုသာ သတ်မှတ်ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရမ်မီ ဆုပေးပွဲကို လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Topics: အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ၊ ဂရမ်မီဆန်ခါတင်စာရင်း